पाकिस्तानमा एकाबिहानै भारतको हमला : अहिलेसम्म के भयो ? – Kantipur Press
काठमाडौं : भारत प्रशासित कश्मीरको पुलवामामा भएको आतंकवादी हमलाको दुई साता नपुग्दै भारतले पाकिस्तानी भूभागमा मंगलबार हमला गरेको छ।
पाकिस्तानले हमलाबाट कुनै पनि मानवीय तथा भौतिक क्षति नभएको दावी गरेको छ भने भारतले भने कयौँ आतंकवादीहरू मारिएको दावी गरेको छ। भारतले यसलाई ‘नन मिलिटरी प्री इम्प्टिभ स्ट्राइक (सैन्य क्याम्प तथा मानव वस्ती लक्षित नगरी खुला ठाउँमा हुने हमला) भनेको छ।
अधिकांश भारतीय मिडियाहरूले दिनभर आतंकवादी समूह जैश–ए–मोहम्मदको अखडामा भारतीय सेनाले गरेको हवाई हमलामा ठूलो हताहती भएको खबर दिइरहेका छन्। कसैले ४० भन्दा बढी आतंकवादीको नामावली नै भेटेको दावी गरेका छन् भने कसैले ३०० देखि ४०० जनाको मृत्यु भएको दावी गरेका छन्। सरकारी स्रोतहरूलाई उद्‍धृत गर्दै लेखिएका यी खबरको स्वतन्त्र रुपमा पुष्टि भने भएको छैन।
मंगलबार बिहान ५ बजेर १२ मिनेटमा पाकिस्तानका तर्फबाट समाचार ब्रेक भयो- भारतीय वायु सेनाले लाइन अफ कन्ट्रोल पार गर्‍यो। पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूरले ट्विटरमा खबर ब्रेक गरे- पाकिस्तानी सेनाले प्रत्याक्रमण गरेपछि भारतीय सैन्य विमान पछि हट्यो।
पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता गफूरले अर्को ट्‍विटरमार्फत दावी गरे- भारतीय सैन्य विमान मुजाफरबाद क्षेत्रबाट पाकिस्तानभित्र घुसेको थियो। पाकिस्तानी सेनाले तत्काल जवाफी कारबाही चालेका कारण भारतीय सेना भागे। र, भाग्ने क्रममा हतार हतार बालाकोट नजिकै कुनै विस्फोटक पदार्थ खसाए। कुनै मानवीय तथा भौतिक क्षति भएन।
केही घण्टालगत्तै भारतका तर्फबाट विदेश सचिव विजय गोखरेले आक्रमणबारे जानकारी दिँदै बालाकोटमा रहेको जैश ए मोहम्मदको सबैभन्दा ठूलो ट्रेनिङ क्याम्पलाई निशाना बनाएर हवाई हमला भएको बताए। भारतलाई लक्षित गरी आत्मघाती हमलाको तयारी भइरहेको सूचनाका आधारमा नियन्त्रण रेखा पार गरे हमला गर्नु जरुरी भएको उनको तर्क छ।
कहाँ भयो हमला ?
पाकिस्तानको खैबर पाख्तुनख्वा प्रान्तस्थित बालाकोटनजिकै भारतीय हवाई सेनाले हमला गरेको थियो। सन् २००५ मा कश्मीर केन्द्र भएर गएको भूकम्पबाट जर्जर बनेको यो सहरलाई साउदी अरेबियाको सहयोगमा पाकिस्तान सरकारले पुनर्निर्माण गरेको थियो।
पाकिस्तानी सेनाका प्रमुखले गरेको ट्विटमा चारवटा फोटो छन्। पहिलो फोटोमा जंगलको बीचमा विस्फोटबाट जमिनमा खाल्डो परेको तथा आसपासका रुखहरू भाँचिएको देखिन्छ। दोस्रो फोटोमा विस्फोटपछि बमाबट उछुट्टिएका टुक्राटुक्रीजस्तो देखिने सामान छन्। तेस्रो फोटोमा विस्फोट भएको बमजस्तो वस्तु देखिन्‍छ भने चौँथो फोटोमा जंगलमुनी पर केही घरहरू तथा खाली जमिन देखिन्छ भने वर विस्फोटले उजाडिएको जंगल र जमिन देखिन्छ।
सुरुमा लाइन अफ कन्ट्रोल पार नगरी बम खसाल्ने योजना भारतीय सेनाको थियो। एक हजार किलो तौल भारतीय हवाई क्षेत्रबाटै खसाल्ने योजना उसको थियो। तर चर्को हावाका कारण यो सम्भव भएन। ‘पश्चिमबाट पूर्वतिर चर्को हावा बगेकाले फाइटर विमानले लाइन अफ कन्ट्रोल पार गरे’, उच्चस्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्रिन्टले लेखेको छ।
चर्चामा मिराज २०००
हवाई हमलाका लागि प्रख्यात मिराज–२००० फ्रान्सेली विमान हो। ४७ फिट लम्बाई र र सात हजार पाँच सय किलो तौलको यही लडाकु विमानबाट भारतले आक्रमण गरेको हो। यसको अधिकतम गति दुई हजार किलोमिटर प्रतिघण्टा हुन्छ। विमानले १३ हजार आठ सय किलो गोला बारुद बोकेर पनि दुई हजार तीन सय ३६ किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा उड्न सक्छ। यो विमानले पहिलो पटक १९७० को दशकमा उडान गरेको थियो। यो डबल इन्जिन भएको मल्टिरोल लडाकु विमान हो।
कश्मीरमा आतंकवाद अन्त्यको माग गर्दै वकिलहरूको प्रदर्शन।
राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको आपतकालीन बैठक लगत्तै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले बालाकोटमा रहेको आतंकवादी क्याम्पलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको तथा ठूलो हताहती भएको भारतीय दावीलाई अस्वीकार गरेका छन्। भारतीय आक्रमणलगत्तै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले आपत्कालीन बैठक बोलाएका थिए। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिफ गफूरले भारतले लाइन अफ कन्ट्रोल नाघेर शान्ति भंग गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले भारतलाई चेतावनी दिएका छन्- हाम्रो प्रतिक्रिया पर्खनू।
यसैबीच पाकिस्तानले पनि लाइन अफ कन्ट्रोलमा गोलाबारी गरेको खबर हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ। भारतीय वायुसेनाको आक्रमणको विरुद्ध पाकिस्तानले मंगलवार साँझ सीमा क्षेत्रमा जवाफी कारबाही गरेको हो। जम्मु कश्मीरमा नियन्त्रण रेखास्थित नौशेरा, राजौरी, अखनुर र कृष्णा उपत्यकामा पाक सेनाले कारबाही गरेको हो।
पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह महुद कुरैशले भारतका तर्फबाट पाकिस्तानमा आक्रमण गर्न नसकेको र भारतीय विमान भाग्दा केही बम खसेको बताएका छन्। उनले पाकिस्तानतर्फ कुनै क्षति नभएको बताएका छन्। उनले भारतीय सेना आफ्नो सीमामा घुस्न खोजेको तर असफल भएको बताए।
भारतले कश्मीरी पृथकतावादी र अन्य लडाकु लुकेर बसेको आशंकामा लाइन अफ कन्ट्रोल पार गरी पाकिस्तान अधीनस्थ क्षेत्रमा हवाई कारबाही गरिएको जनाएको छ। भारतले यसलाई ‘नन मिलिटरी प्री इम्प्टिभ स्ट्राइक’ भनेको छ। इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार भारतीय सेनाले कुनै पनि सैन्य अखडा वा मानवबस्ती नभइ खुला ठाउँमा आक्रमण गरेको छ र यो हमलालाई आत्मरक्षा भएनेको छ। यदि सैन्य क्याम्प वा अखडामा आक्रमण गरो भए यो युद्धको सिधा घोषणा हुन्थ्यो। यसलाई प्री इम्प्टिभ एक्सन भनेर पाकिस्तानमाथि कुटनीतिक दवाब पार्न खोजेजस्तो देखिन्छ।
प्रिन्ट अनलाइनका अनुसार भारतले सिधा सैन्य अखडामा हमला गरेको भए त्यो संयुक्त राष्ट्रसंघमा छलफलको विषय बन्न सक्थ्यो र भारतका लागि पनि भारी पर्न सक्थ्यो।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने घटनाबारे सिधा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छैनन् तर दिनभर भएका सभा तथा कार्यक्रमहरूमा उनी प्रसन्न देखिन्थे। भारतको स्वाभिमानलाई अझ उठाउने उनले सबैजसो कार्यक्रमहरूमा सुनाए। नजिकिँदै गरेको चुनावको प्रचारको झल्को दिने गरी मिडियाहरूमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहभागी कार्यक्रमहरू दिनभर नै देखाइएको छ।
क्षति के भयो ?
हालसम्म पाकिस्तानले घटनामा क्षति नभएको बताएको छ भने भारतले आक्रमणमा कयौँ आतंकवादी मारिएको दावी गरेको छ। भारतीय विदेश सचिव विजय गोखलेले एक पत्रकार सम्मेलनमा कमान्डरहरूसहित ठूलो संख्याका लडाकूहरू मारिएको दावी गरेका छन्। उनले आमनागरिकलाई भने कुनै क्षति नपुगेको बताएका छन्।
यदि भारतीय दावीलाई सही ठान्ने हो भने त्यत्रो संख्याका आतंकवादीहरू किन एकै ठाउँमा भेला भएका थिए भन्ने खुल्न सकेको छैन। पुलवामामा भएको हमलापछि भारतले जतिबेला पनि एक्सन लिन सक्छ भन्ने चर्चाका बीच त्यति ठूलो संख्यामा लडाकूहरू किन भेला भएका थिए भन्ने शंका उब्जिएको छ। रोयटर्सका अनुसार बालाकोटका गाउँलेहरूले चारवटा धमाका सुनेका थिए। एकजना घाइते भएको समाचारमा उल्लेख छ। उनीहरूले रुखहरू लडेको र एक घर भत्किएको बताएको उसले जनाएको छ।
हमला आतंकवादी क्याम्पमै भएको हो ?
कतिपयले हमला मानवरहीत स्थानमा भएको हो वा आतंकवादीको क्याम्पमा भन्नेमा शंका गरेका छन्। सुरक्षा मामिला विज्ञ राहुल वेदीले न्यू योर्क टाइम्ससँग भनेका छन्- ‘उनीहरूले आतंकवादी क्याम्पमा आक्रमण गरेको भनेका छन्। तर गुप्तचर सूचनाहरूका अनुसार पाकिस्तानमा रहेका ती क्याम्प हालै खाली गरिएका थिए।‘
वेदीका अनुसार यो राजनीतिक मसलाबाहेक केही होइन। ‘मोदीलाई चुनावका मुखा केही न केही देखाउने एक्सन गर्नु थियो, यो त्यही हो’, उनले भनेका छन्।
संवेदनशील बन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको आग्रह
भारत–पाकिस्तानबीच तनाव बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले दुवै देशलाई संयमित हुन आग्रह गरेका छन्। यूरोपेली संघ (ईयू)ले दुबै देशलाई ‘अत्यधिक संयमता अपनाउन’ आग्रह गरेको छ। ईयू प्रवक्ता माजा कोसिजान्सिकले दुबै मुलुकले अत्यधिक संयमता अपनाउने र स्थितिलाई थप तनावतिर जान नदिन माग गरे।
पाकिस्तानको निकट मित्र चीनले पनि दुवै देशलाई संयमित हुन आग्रह गरेको छ। आतंकवादविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सञ्चालन गर्न उसले भारतलाई आह्वान गरेको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लु काङले ‘दक्षिण एशियाका महत्वपूर्ण दुई देशबीच असल सम्बन्ध बनाउनुपर्ने र यसबाट क्षेत्रीय शान्ति एवं स्थिरता कायम हुने’ बताएका छन्।’ यसैगरी अस्ट्रेलियाले पनि दुवै देशलाई थप कारबाही नगर्न आग्रह गरेको छ। आपसी वार्ताद्वारा समस्या सुल्झाउनुपर्नेमा उसको जोड छ।
दुई देशबीच बढ्दो तनाव कुन दिशातिर जान्छ भन्न गाह्रो छ। पाकिस्तानले आज धमाका भएको भनिएको स्थानमा बुधबार पत्रकारहरूलाई अवलोकनका लागि लैजाने बताएको छ। दिनभर धमाकादेखि हताहतीसम्मका खबर आए पनि घटनास्थलका फोटो/भिडियो मिडियामा आएका छैनन्। सम्भवतः पत्रकारहरूको बुधबारको भ्रमणपछि नयाँ कुराहरू सार्वजनिक हुनेछन्।
पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह महुद कुरैशले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘जुन ठाउँमा आक्रमण भएको भारतीय दाबी छ। त्यहाँ खाली छ। त्यो ठाउँमा बुधवार सञ्चारमाध्यमलाई लगिनेछ।’ मंगलवार बालाकोट जान थालेका सञ्चारकर्मीलाई मौसम ठीक नभएको बताएको थियो। तर भारतले भने त्यो ठाउँ मंगलवार पाकिस्तानी सेनाले सफा गरिरहेको दाबी गरेको छ।
राशिफल: आज वि.सं. २०७५ फाल्गुन १५ गते बुधबार